Igadi yabucala ye-MIMOSA WIFI Idama lokuqubha
Indlu yasefama itholakala kwidolophana yamandulo yaseRomola, exhunywe kwindlela yangasese, malunga ne-300m ubude, ukuya kwindlela enkulu yedolophu kwaye igxininiswe ngokupheleleyo kuxolo kunye nohlaza lweediliya kunye nemithi yomnquma, iinduli ezijikelezileyo zinika iimbono ezintle, ezibonisa kakhulu kwaye bezipholele phakathi zohlobo angcoliswe kwaye luhlaza, ukuba alternation landscape zomhlaba olinywayo kunye neenkuni awayedla iimbono ezisemaphandleni Tuscan.
Indlu entle evalelweyo ilungele iintsapho okanye amaqela abahlobo kubantu aba-4 okanye aba-6.
Ifulethi elimnandi kwindlu yasefama ezalwe njengemboniselo ngexesha leemfazwe phakathi kweriphabliki zaseFlorence kunye neSiena kwaye namhlanje isihlomelo se-villa ukusuka kwi-1500s (ehlala umnini). Ipropathi ibekwe kwindawo ezolileyo embindini wefama yeehektare ezili-12 evelisa iwayini kunye neoyile yomnquma, kwaye nje i-350 m ukusuka kumbindi welali eneempawu (isikhululo sebhasi eFlorence sifikeleleka ngemizuzu engama-20). Le ndlu inefenitshala yeklasikhi, ikhululekile kakhulu kwisitayile saseTuscan kwaye ixhotyiswe ngabo bonke ubutofotofo, inendawo enkulu yabucala exhotyiselwe ukuhlala ngaphandle. Iimbono ezintle ezilalini. Kwiindwendwe, idama lokudada elikhulu nelihle elibiyelweyo, elikwindawo ebalaseleyo phakathi kwemithi yomnquma (60 m ukusuka kwindlu). Ngesicelo, kunokwenzeka ukuba undwendwele umyezo we-villa kunye namachibi okunxibelelana amandulo, ondliwe ngumthombo wendalo kunye nemithi yamandulo ye-lemon. Iimbono ezintle ezivela kwigadi yabucala ebekwe ngaphezulu kwegadi eyimbali yevilla.
I-WI-FI yasimahla kuyo yonke ihotele. Indawo yokupaka yasimahla kwipropati.
Igumbi langaphandle elinomatshini wokuhlamba osebenza ngemali ezinkozo, iayini kunye nebhodi yoku-ayina.
Imigama: ivenkile yokutya, iibhari ezi-2, i-stationery-newssagent, ibhasi eya eFlorence nge-300m.
Umgangatho ophantsi: Indawo enkulu yokuhlala enokufikelela kwisango elingaphandle, igumbi lokutyela elixhotyiswe kakuhle (i-oveni, i-microwave, isikhenkcisi, umatshini wokuhlamba izitya, njl.njl…) kunye netafile yokutyela, izitulo. Igumbi lokuhlala lokuqala kunye nelikhulu elinobume obufana no-L (nokufikelela ngaphandle), iisofa ezimbini, indawo yokutyela emnandi, itafile enkulu kunye nezitulo, indawo yomlilo (iTV-SAT) kunye nebhedi esezantsi ephindwe kabini, igumbi lokunxiba / ikhabethe, igumbi lokuhlambela elineshawa. .
Umgangatho wokuqala: Igumbi lokulala elikhulu eliphindwe kabini elinefan yesilingi yombane, igumbi lokulala elinamawele elinefeni yombane yombane, igumbi lokuhlambela lesibini elineshawari. Inethi zeengcongconi kuzo zonke iifestile. Indawo emnandi kunye nenkulu yabucala yangaphandle yengca phakathi kwemithi yomnquma malunga. I-15 m ukusuka kwindlu (i-barbecue ehambayo) kunye nombono omhle wegadi ye-villa kunye nemimandla yasemaphandleni. Kule ndlu kukho izindlu zokuhlambela ezi-2 ezipheleleyo, phezulu, kukho amagumbi amabini okulala, enye ibhedi ye-2 kwibhedi ye-sofa kumgangatho ophantsi osetyenziswa yindlu yangasese, kwaye kunokwenzeka ukuba ungeze ibhedi enye kunye ne-1 cot xa ucela umrhumo. eyongezelelweyo